October 9, 2019 - Update New
October 9, 2019 Update New 0
ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာ အကောင်ရေ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ငါးအုပ်ကြီးတွေ ကမ်းဆွဲပိုက်တွေမှာ ဖမ်းမိနေ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့နယ်က ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာ အကောင်ရေ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ငါးအုပ်ကြီးတွေ ကျနေပြီး ကမ်းနီးငါးဆွဲပိုက်တွေနဲ့ ဖမ်းဆီးရမိနေပါတယ်။ ကမ်းခြေအနီးမှာ အောက်တိုဘာလ(၇)ရက်က စပြီး ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ငါးအုပ်ကြီးတွေ ရောက်ရှိနေတာပါ။ ငါးအုပ်တစ်အုပ်မှာ အကောင်ရေ (၂၅ဝဝ) ကနေ […]
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြောင်းမြမြို့နယ်၊ဂတ်စုကျေးရွာတွင် ၆ တန်း ကျောင်းသူ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ကို ခယ်အိုဖြစ်သူမှ ခြိမ်းခြောက်ပြီး ၁၅ ကြိမ်ထက်မနည်း အလိုမတူပဲအာဓမ္မပြု မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မြောင်းမြမြို့နယ်၊ဂတ်စုကျေးရွာတွင် အောက်တိုဘာ ၉ ရက်က မိဘများမှ ၎င်းတို့မရှိခိုက် ၆ တန်းကျောင်းသူ အသက် ၁၄ အရွယ်ရှိ […]
ကိုၿဖိဳးျပည့္စုံကိစၥက အ​ေတာ္​ေလးသင္ခန္းစာ ယူစရာ​ေကာင္းတယ္
October 9, 2019 Naing 0
ေတးသံရွင္ ျဖိဳးျပည့္စုံ ကိစၥ မွ သင္ခန္းစာ ကိုၿဖိဳးျပည့္စုံကိစၥက အ​ေတာ္​ေလးသင္ခန္းစာ ယူစရာ​ေကာင္းတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ပိုလို့ ပိုလို့ စိတ္ပ်က္စရာ​ေကာင္းလာတယ္။ ​​ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ မဲ့လာတယ္။ နာမည္​ေက်ာ္တစ္​ေယာက္ ျဖစ္လို့ လူသိသြားတယ္၊ ပုံရိပ္ထိခိုက္တယ္ ဆို​ေပမဲ့ နာမည္​ေက်ာ္ျဖစ္လို့လည္း ခု​လို အဆင္​ေျပတာ ​ေျပာရမယ္။ မဟုတ္ရင္ လူမသိ […]
ပြန်လွတ်လာတဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ ပြောပြီ
ပြန်လွတ်လာတဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ ပြောပြီ နစ်နာမှုအတွက်မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ “ကျနော် ၊ ရော်နီ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းကိုတို့ရဲ့ မှန်ကန်မှုကို ယုံကြည်ပေးတဲ့ အယောက်ချင်းစီ ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မှာ media conference လေးတခု လုပ်နိုင်ဖို့ ကျနော် စီစဉ်ပါ့မယ်..” လို့ ဖြိုးပြည့်စုံက FaceBook […]
အခက်ကြုံတိုင်း ကြည့်ဖို့ (၇) ရက် သားသမီးများအတွက် 2019 တစ်နှစ်လုံးစာ ဟောစာတမ်းနှင့် ယတြာ
အခက်ကြုံတိုင်း ကြည့်ဖို့ (၇) ရက် သားသမီးများအတွက် 2019 တစ်နှစ်လုံးစာ ဟောစာတမ်းနှင့် ယတြာ 2019 ခုနှစ် ၇ ရက်သားသမီးများအတွက် ၁နှစ်စာဟောစာတမ်းနှင့် ယတြာ မိမိတို့ရဲ့ ဟောစာတမ်းကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ။ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ကောင်းတဲ့ နှစ်တွေမှာလည်း […]
သင့်ကောင်မလေးသင့်ကို တမ်းလမ်းစွဲဖြစ်နေအောင်လုပ်ရမယ့် အချက် (၈) ချက်
(1) ဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် နေ့လည်ဘက် တရေးနိုးအိပ်သည်ကအစ report တင်ပါ သူအွနိလိုင်းမရှိချိန်ကိုယ်လိုင်းပေါ်တက်မိရင်တောင်smsပို့ပါ။လိုင်းပေါ်ရောက်နေကြောင်း ဘယ်မိန်းမပုံမှလိုက်မကြည့်နေကြောင်း၊ မကြူကြောင်း နားဝင်အောင်ပြောပြပေးပါ …။ (2) အသေးစိတ်က အစ ဂရုစိုက်ပါ မနက်စာဘာစားထားလဲ။ အခုဘာလုပ်နေလဲ။အလုပ်ပင်ပန်းနေလား။တစ်ရုံးတည်း တစ်ကျောင်းတည်းအတူတူရှိပါက ထမင်းစားပြီးလျှင်တစ်ရှူးအဆင်သင့်ဝယ်ထားပြီးပေးခြင်း၊နေ့လည်အိပ်ချင်ပြေ ကော်ဖီ အချိူရည်ဝယ်ပေးခြင်းစသည်ဖြင့် ဂရုစိုက်ပေးပါ။ ဂရုစိုက်တာကိုမကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးမရှိပါဘူး …။ […]
ခုပဲ သင့်ရဲ့ ညာလက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရအောင်.. နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ..? ခုပဲ ညာလက်ဖဝါးနဲ့ အဖြေရှာရအောင် ကိုယ့်ရဲ့လက်ဖဝါးကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင် (၁). ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသောသူ၊ ခေါင်းမာသောသူ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားပြီး ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို လေးစားအားကိုးခံရမည့်သူပါ။ မမှားကိုနည်းအောင် ကြိုးစားနိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေမှာပါ။ ဒါပင်မဲ့ နည်းနည်းခေါင်းမာသူဖြစ်ပြီး […]
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့ ညနေက မြန်မာပလာဇာမှာ ဆေးမှုသံသယမှုနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း​ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ နဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး တေးရေး ငြိမ်းချမ်းကို နဲ့ တေးရေး ရော်နီစန်းလွင် တို့ကို အပြစ်မရှိလို့ ဒီနေ့ ညနေ ၃ […]
လက်ချောင်းအတိုအရှည်ကပြောတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ ့စိတ်နေသဘောထား
၁။လက်သူကြွယ်ကလက်ညှိုးထက်ပိုရှည်တဲ့လူတွေဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဩဇာရှိတယ်၊နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတယ်။သူတို့တွေဟာအပြောအဆိုဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးattention ဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲသိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ရည်မှန်းချက်လည်းကြီးပြီးအောင်မြင်တဲ့လူတွေလဲဖြစ်တယ်။ဘာလုပ်လုပ်ထူးထူးချွန်ချွန်လုပ်တတ်တယ်။ ၂။လက်သူကြွယ်ကလက်ညှိုးထက်ပိုတိုတဲ့လူတွေဟာကိုယ့်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတင်းတိမ်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်ပြီးဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။သူတို့တွေဟာစိတ်တည်ငြိမ်စွာထားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတစ်ခုခုကိုစလုပ်ရင်လည်းအဆုံးထိတာဝန်ယူတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် ၃။လက်သူကြွယ်နဲ့လက်ညှိုးတစ်ညီတည်းရှိနေတဲ့လူတွေဟာဂရုစိုက်ပေးတတ်တယ်၊မျှတမှုရှိတယ်၊ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်တတ်သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့တွေဟာနူးညံ့သိမ်မွှေ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးပဋိပက္ခတွေကိုရှောင်ရှားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့တွေဟာသူငယ်ချင်းကောင်းတွေဖြစ်ပြီးတစ်ပါးသူကိုကူညီဖို့အမြဲအသင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်။အလုပ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်၊အချစ်ရေးမှာဖြစ်ဖြစ်သစ္စာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အကောင်းမြင်တတ်ပြီးဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းမြင်ရန်ကြိုးစားတတ်ပါတယ်။ Writer – Min Thu ( XYZ NEWS ) Zawgyi ၁။လက္သူႂကြယ္ကလက္ညႇိဳးထက္ပိုရွည္တဲ့လူေတြဟာဆြဲေဆာင္မႈရွိတယ္ဩဇာရွိတယ္၊ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတယ္။သူတို႔ေတြဟာအေျပာအဆိုဆက္ဆံေရးေကာင္းၿပီးattention ဘယ္လိုရေအာင္လုပ္ရမလဲသိတဲ့လူေတြျဖစ္တယ္။ရည္မွန္းခ်က္လည္းႀကီးၿပီးေအာင္ျမင္တဲ့လူေတြလဲျဖစ္တယ္။ဘာလုပ္လုပ္ထူးထူးခြၽန္ခြၽန္လုပ္တတ္တယ္။ ၂။လက္သူႂကြယ္ကလက္ညႇိဳးထက္ပိုတိုတဲ့လူေတြဟာကိုယ့္ကိုကိုယုံၾကည္မႈရွိၿပီးတင္းတိမ္တတ္တဲ့လူေတြျဖစ္တယ္။သူတို႔ဟာေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြျဖစ္ၿပီးဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။သူတို႔ေတြဟာစိတ္တည္ၿငိမ္စြာထားတတ္တဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီးတစ္ခုခုကိုစလုပ္ရင္လည္းအဆုံးထိတာဝန္ယူတတ္တဲ့သူေတြျဖစ္တယ္ ၃။လက္သူႂကြယ္နဲ႔လက္ညႇိဳးတစ္ညီတည္းရွိေနတဲ့လူေတြဟာဂ႐ုစိုက္ေပးတတ္တယ္၊မွ်တမႈရွိတယ္၊ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္တတ္သူေတြျဖစ္တယ္။သူတို႔ေတြဟာႏူးညံ့သိမ္ေမႊ႕တဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီးပဋိပကၡေတြကိုေရွာင္ရွားတတ္တဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။သူတို႔ေတြဟာသူငယ္ခ်င္းေကာင္းေတြျဖစ္ၿပီးတစ္ပါးသူကိုကူညီဖို႔အၿမဲအသင့္ျဖစ္ေနတတ္တယ္။အလုပ္မွာျဖစ္ျဖစ္၊သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ျဖစ္၊အခ်စ္ေရးမွာျဖစ္ျဖစ္သစၥာရွိတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။အေကာင္းျမင္တတ္ၿပီးဘယ္ကိစၥမွာပဲျဖစ္ျဖစ္အေကာင္းျမင္ရန္ႀကိဳးစားတတ္ပါတယ္။ Writer – Min Thu ( XYZ NEWS )
အြန္လိုင္းေပၚမွာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ကေလး ႏွစ္ေယာက္ ရဲ့ လုပ္ရပ္ ဗြီဒီယိုဖိုင္ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းထဲမွာ ေခြးေလးေတြ အစားေကာင္းေကာင္းစားရမွာပဲ သနားစရာကေလးႏွစ္ဦး လတ္တေလာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေပၚမွာ အေကာင့္ပိုင္ရွင္ Swe Swe Oo ဆိုသူရဲ့ ပို႔စ္တစ္ခုကို ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ဒါဟာ ကေလးငယ္ေလးႏွစ္ဦးရဲ့ ၾကင္နာတတ္တဲ့ စိတ္ႏွလုံးထားေကာင္းကို […]